Dokam-barotra momba ny fitondran-tena vs. dokam-barotra momba ny toe-javatra: Inona no mahasamihafa azy? | Martech Zone
Ny dokam-barotra nomerika indraindray dia mahazo rap ratsy amin'ny fandaniana, saingy tsy azo lavina fa, rehefa atao tsara, dia mety hitondra vokatra mahery vaika.
Ny zava-misy dia ny dokam-barotra nomerika dia manome fahafahana lavitra lavitra noho ny endrika ara-barotra organika rehetra, ka izany no mahatonga ny mpivarotra ho vonona ny handany izany. Ny fahombiazan'ny doka nomerika, mazava ho azy, dia miankina amin'ny fomba mifanaraka tsara amin'ny filana sy ny fanirian'ny mpihaino kendrena.
Matetika ny mpivarotra no miantehitra amin'ny karazana dokam-barotra roa mba hanatanterahana izany - dokam-barotra momba ny toe-javatra sy dokam-barotra momba ny fitondran-tena.
Ny dikany ao ambadiky ny dokam-barotra momba ny fitondran-tena sy ny toe-javatra
Ny dokam-barotra momba ny fitondran-tena dia ny fanolorana doka ho an'ny mpampiasa mifototra amin'ny fampahalalana momba ny fitondran-tenany tamin'ny fitetezana teo aloha. Izany dia mitranga amin'ny fampiasana angon-drakitra voaangona amin'ny mari-pamantarana toy ny fotoana lany amin'ny tranokala iray, ny isan'ny kitika natao, ny fotoana nitsidihana ilay tranokala, sy ny sisa.
Io angona io avy eo dia ampiasaina hananganana olona mpampiasa maromaro manana toetra samy hafa azo iantefan'ny doka mifandraika avy eo. Ohatra, raha mampifandray ny vokatra A sy B ianao, dia mety hifanerasera amin'i B ny mpihaino kendrenao liana amin'ny A.
Etsy ankilany, contextual dokam-barotra dia ny fametrahana doka amin'ny pejy mifototra amin'ny votoatin'ireo pejy ireo. Mitranga izany amin'ny alàlan'ny fampiasana dingana fantatra amin'ny anarana hoe kendrena amin'ny teny manodidina, izay ahitana ny fizarana doka mifototra amin'ny lohahevitra na teny fototra mifanaraka amin'izany.
Ohatra, ny pejin-tranonkala miresaka momba ny boky dia mety ahitana doka ho an'ny solomaso mamaky. Na vohikala mamoaka horonan-tsary momba ny fanazaran-tena maimaim-poana, fomba fanao, ary fomba fanamboarana dia afaka manao doka momba ny kojakoja mahandro miaraka amin'ny fanazaran-tenany — ahoana Fitness blender no.
Ahoana no fiasan'ny dokam-barotra contextual?
Ireo mpanao dokam-barotra momba ny contexte dia mampiasa sehatra iray amin'ny lafiny fitakiana hametrahana ny dokany amin'ny pejy mifandraika amin'izany.
Ny fametrahana ny masontsivana no dingana voalohany. Raha ny lohahevitra dia sokajy ankapobeny izay hifanaraka amin'ny doka iray (toy ny lamaody, politika, fandrahoan-tsakafo, na fanatanjahan-tena), ny teny fanalahidy dia manome lasibatra mazava kokoa ao anatin'ireo lohahevitra ireo. Ho an'ny ankamaroan'ny doka, ny fisafidianana lohahevitra manokana sy ny teny fanalahidy 5-50 eo ho eo amin'io lohahevitra io dia tokony ho ampy.
Avy eo, Google (na izay milina fikarohana ampiasaina) dia hamakafaka ireo pejy ao amin'ny tambajotrany mba hifanaraka amin'ny doka amin'ny atiny mifandraika indrindra. Ho fanampin'ny teny fanalahidy nofantenan'ny mpanao dokambarotra, ny motera fikarohana dia handray zavatra toy ny fiteny, lahatsoratra, firafitry ny pejy ary rafitry ny rohy.
Miankina amin'ny fomba manokana tian'ny mpanao dokambarotra ho tratrarina, ny motera fikarohana dia mety handinika pejy mifanandrify amin'ireo teny fototra nomena ihany. Rehefa vita ny famakafakana, dia hapetraka ao amin'ny pejin'ny motera fikarohana izay heverina ho manan-danja indrindra ny doka.
Ahoana no fiasan'ny dokam-barotra momba ny fitondran-tena?
Satria miankina amin'ny fitondran-tenan'ny mpampiasa taloha ny dokam-barotra momba ny fitondran-tena, ny zavatra voalohany tokony hataon'ny mpanao dokam-barotra dia ny manara-maso an'io fihetsika io. Manao izany amin'ny alalan'ny cookies izy ireo, izay ampidiriny ao amin'ny kapila mafy an'ny mpampiasa isaky ny misy olona mitsidika ny tranokala marika (ary misafidy ny hanaiky mofomamy).
Ny cookies dia manampy azy ireo hahita hoe aiza no ivezivezena ny mpampiasa, inona ny valin'ny fikarohana kitiny, impiry izy ireo no mitsidika ny tranokalan'ny marika, izay vokatra tadiaviny na ampidiriny ao anaty sarety, sy ny sisa.
Vokatr'izany dia afaka mikendry mpampiasa izy ireo amin'ny doka mifandraika amin'ny hoe sambany izy ireo no ao amin'ny tranokala na mpividy miverimberina. Mampiasa cookies ihany koa ny mpanao dokam-barotra hanaraha-maso ny geolocation sy ny mari-pamantarana adiresy IP mba hikendry ireo mpampiasa manana doka mifandraika amin'ny an-toerana.
Vokatry ny fanaraha-maso ny fitondran-tena, ny mpampiasa dia mety hahita doka momba ny marika nojereny tamin'ny herinandro lasa teo rehefa mamaky ny vaovao an-tserasera na mikaroka zavatra hafa tanteraka. Ny ambiny amin'ny fahalianan'izy ireo taloha na ny fampiroboroboana mifandraika eo an-toerana no manosika azy ireo hikasika.
Misy fitaovana maromaro afaka manampy ny orinasa hanara-maso ny fihetsiky ny mpampiasa ary mikendry azy ireo amin'ny doka mifanaraka amin'izany.
Inona no tsara kokoa: ny toe-javatra sa ny fitondran-tena?
Mora ny mampifangaro ireo karazana doka roa ireo, satria samy mampiseho doka mifototra amin'ny tombontsoan'ny mpampiasa izy ireo. Tsy mitovy anefa izy ireo. Raha miasa mifototra amin'ny tontolo iainan'ny mpampiasa ny dokam-barotra ara-teknolojia - ny toetoetran'ny votoatin'ny tranokala, amin'ny teny hafa - ny dokam-barotra momba ny fitondran-tena dia miankina amin'ny hetsika nataon'ny mpampiasa alohan'ny hahatongavana amin'ny tranokala, toy ny pejin'ny vokatra notsidiny.
Maro no mihevitra fa ny dokam-barotra amin'ny fitondran-tena no mahasoa kokoa amin'ny roa, satria manome fahafahana manokana kokoa amin'ny alàlan'ny fikendrena ireo mpampiasa mifototra amin'ny tena fitondran-tenany izy io fa tsy mametaka votoaty mifandraika amin'ny tranokala. Na izany aza, misy tombony miavaka maromaro ny contextual dokam-barotra izay tokony ho marihina.
Mora ny fampiharana - Ny tombony lehibe indrindra amin'ny dokam-barotra momba ny fitondran-tena dia ny haavon'ny personalization atolony. Na izany aza, izany dia mitaky angona mpanjifa midadasika sy fitaovana mety handinihana izany, izay mety tsy ho takatry ny orinasa manana loharano vitsy kokoa. Ny dokam-barotra momba ny contexte dia mora kokoa sy tsy dia lafo loatra hanombohana ary manome lanjany ampy mba ho fomba tsara indrindra hisarihana ny mpitsidika tranokala. Rehefa nilaza izany, ny orinasa dia miantehitra mafy amin'ny cookies avy amin'ny antoko fahatelo mba hanomezana traikefa momba ny doka manokana ho an'ny mpitsidika tranokala. Na izany aza, miaraka amin'ny fitomboan'ny fitsipika momba ny angon-drakitra (GDPR) azo angonina sy ampiasaina amin'ny mpampiasa, ny orinasa dia mila fitaovana sy rindrambaiko mandroso kokoa amin'ny fitantanana ny fampielezan-kevitry ny dokam-barotra mifandraika amin'ny teny manodidina satria misy dingana iray hafa tafiditra, izany hoe, mangataka alalana amin'ny ny mpampiasa mba hanangona ny angona. Noho izany, raha te hamporisika ny fananganana nomerika haingana kokoa sy ny fahatakarana ambony kokoa momba ny fiovana vaovao amin'ny dokam-barotra ao amin'ny ekipan'ny varotrao ianao, amin'ny toe-javatra toy izany, dia azo ampifandraisina amin'ny rindrambaikon'ny dokam-barotra ny zotram-pifanakalozan-dresaka ho toy ny fomba hampiofanana azy ireo.
Ohatra, azonao atao ny manangana andalana mba hamporisihana ny fampahatsiahivana ho an'ny mpanao dokam-barotrao manangana fanentanana doka ao amin'ny EU. Azonao atao ny mametraka lisitra fanamarinana na maody microlearning mba hanomezana ny mombamomba ny mpampiasa farany mba handrakotra ny fototra rehetra eo am-pametrahana ny fampielezan-kevitra ary hanaraka tsara ny fitsipika rehetra. Izany dia mitondra antsika amin'ny teboka faharoa.
Privacy – Ny sazy ho an'ny fampiasana amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny mombamomba ny mpampiasa manokana dia mety ho goavana. Ankoatr'izay, ny cookies dia tsy mandeha ho azy amin'ny tranokala iray, ary ny mpampiasa dia mila misafidy an-tsitrapo ho azy ireo, ka mahatonga ny retargeting ho sarotra kokoa. Hitanao fa mitaky fiainana manokana bebe kokoa ny mpampiasa, ao anatin'izany ny safidy, ny mangarahara ary ny fifehezana ny fomba ampiasana ny angonany. Mazava ho azy fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny fitakian'izy ireo mihamitombo ny tontolon'ny tranonkala. Raha efa nanala ny cookie an'ny antoko fahatelo i Safari sy Firefox, dia hanao izany i Google roa taona mahery. Saingy satria tsy miantehitra amin'ny cookies ny dokam-barotra contextual, tsy mila manahy ny amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny mpanao dokambarotrao rehefa mampiseho ny dokany.
Fiarovana ny laza malaza - Ny lafiny iray amin'ny fiarovana dia tsy isalasalana fa ny fanarahan-dalàna. Na izany aza, ny laza dia mety ho zavatra sarotra arovana, indrindra fa ny mpanao dokam-barotra dia tsy afaka mifehy foana ny toerana hisehoan'ny dokany. Matetika, ny marika dia niatrika fanoherana satria ny dokany dia navoaka tamin'ny tranokalan'ny olon-dehibe na ireo manana fomba fijery mahery vaika. Izany anefa dia vokatry ny fitondran-tenan'ny mpampiasa. Mifanohitra amin'izany kosa, ny doka momba ny contextual dia mametraka ny pejin-tranonkala ho ivon'ny zavatra, ary ny marika dia mifehy an'io pejin-tranonkala io amin'ny alàlan'ny famaritana ny lohahevitra, ny lohahevitra ary ny teny fototra mifandraika amin'ny doka.
Fitantanana lehibe kokoa – Ny vinavina fototra manamafy ny dokam-barotra momba ny fitondran-tena dia ny tian'ny mpampiasa hahita doka mifandraika amin'ny fironana ankapobeny amin'ny fihetsik'izy ireo mijery. Na izany aza, mety hitranga fa tsy mifanaraka amin'ireo fironana ireo ny faniriany ankehitriny. Ohatra, mety tsy te hahita doka momba ny serivisy famolavolana sary ny olona iray mikaroka fitaovana ara-panatanjahantena, na dia efa nijery tolotra famolavolana sary aza izy ireo teo aloha. Mifanohitra amin'izany kosa, ny doka iray ho an'ny vovo-proteinina organika dia mety mifandray kokoa amin'ny toe-tsainy amin'izao fotoana izao ary mahasarika tsindry bebe kokoa.
Tsy misy atahorana ny fahajambana sora-baventy – Izany dia tranga mahazatra izay ny mpampiasa dia nianatra tsy niraharaha ny doka. Ohatra, ny tranokala famandrihana tapakila sarimihetsika manao doka ho an'ny sehatra fijerena sarimihetsika dia misy dikany kokoa noho ny fandefasana doka mifandraika amin'ny fandrahoan-tsakafo.
Ny doka mifandraika amin'ny toe-javatra misy ny marika tsy dia fantatra dia tsaroan'ny olona 82% bebe kokoa raha oharina amin'ny doka an'ny marika malaza fa tsy mifandraika amin'ny votoatin'ny pejy.
Fanampin'izany, maro ny olona tsy mahazo aina amin'ny fanaovana doka tselatra mifototra amin'ny asa fitetezana azy taloha. Misy ny fahatsapana ankapobeny ny fanaraha-maso ataon'ny orinasa lehibe izay afaka manakana ny olona tsy hikasika ny doka na dia mety ho manan-danja aza ny doka. Amin'ny lafiny iray, ny dokam-barotra contextual dia mifanaraka amin'ny doka amin'ny pejin-tranonkala, ka mahatonga azy io ho tsy dia 'tahaka ny stalker' ary azo itokisana kokoa ny manindry azy. Rehefa mahita doka mifandraika amin'izany ny mpampiasa, dia mihamitombo ny fahitana doka, ary mitombo ny mety hisian'ny tahan'ny click-through ambony.
Araka ny Adpushup:
Salanisan'ny lasibatra momba ny toe-javatra fitomboana 73% amin'ny fampisehoana raha ampitahaina amin'ny fitondran-tena mikendry.
49% amin'ireo mpivarotra amerikana mampiasa kendrena contextual amin'izao fotoana izao.
31% amin'ny marika mikasa ny hanao izany hampitombo ny fandaniany amin'ny dokam-barotra contextual taona manaraka.
Momba ny “Context” daholo izany
Ho fehin-kevitra, samy manana ny anjara asany amin'ny paikady ara-barotra nomerika izy roa, ary ny marika samihafa dia mety hanome lanja samihafa ho azy ireo.
Saingy misy fotoana izay safidy tsara kokoa ny dokam-barotra contextual. Manampy ireo marika hamoaka fanentanana izay tsy mitaky loharanon-karena maro ho an'ny fampiharana tonga lafatra izany. Miantoka ihany koa izy ireo fa tsy mila mampiasa angon-drakitra mpampiasa manokana na manahy ny amin'ny fanarahana ny GDPR. Izy ireo dia afaka mandeha fotsiny amin'ny kendrena teny fanalahidy fa tsy.
Amin'ny farany, ny zava-dehibe dia ny fahafantarana izay tianao hotanterahan'ny dokao, ny fomba tianao hahatongavana amin'ny mpanjifanao momba ny marikao, ary ny ohatrinona no vonona laninao amin'izany. Avy eo, ataovy ny safidinao - ny vokatra dia handoa rehefa mandeha ny fotoana.
Tags: sokajy dokacookie adteny fanalahidy dokatsiambaratelon'ny dokamifandraika amin'ny dokaadpushupfizarana dokam-barotrafahajambana amin'ny bannerdokam-barotra fitondran-tenalazan'ny marikamijery tantarateny manodidinaireo dokambarotra ifanaovanacontextual dokam-barotratombony amin'ny dokam-barotra contextualantontan'isa momba ny dokam-barotra contextualFitness blendergdprdoka geolocationdoka contextual googledoka fampisehoana googleadiresy ip dokadoka eo an-toeranafikarohana doka